कहाँ गयो हाम्रो राष्ट्रियता ? « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
« कपिलबस्तु दिवस अभियानबारे बिएफबिएससंग भएको कुराकानीको क्लिप
चन्द्रे नेपालीको मृत्यु »
सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्नो मुलुकको सीमा सुरक्षा गर्नु हो । मानव समाजको विकासक्रममा जब राज्यको उत्पत्ति भयो, त्यसवेला राज्यको प्रथम दायित्व सके क्षेत्र विस्तार गर्ने र नसके भएको क्षेत्र रक्षा गर्ने थियो । क्षेत्र विस्तारकै लागि आरम्भिक वर्षमा राज्यराज्यबीच घमासान युद्ध हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यसै गरेका थिए । त्यही प्रयोजनका लागि सेना राखिन्थ्यो । प्रत्येक राज्यले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर सेनाको भरणपोषण गथ्र्यो र त्यसलाई चुस्तदुरुस्त राख्थ्यो । सेनाको रचना राज्यभित्रको प्रयोजनका लागि नभएर केवल बाहिरी आक्रमणबाट आफ्नो राज्यको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो ।
राज्यको सीमाको महत्त्व आजको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै ठूलो छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा भारत र पाकिस्तानबीच विगतमा सीमाको विवादलाई लिएर ठूला युद्ध भए । ती सबै युद्ध अभ्यासका लागि लडिएका थिएनन्, आफ्नो दाबी रहेको भूभाग फिर्ता लिन र सीमासुरक्षाकै लागि लडिएका थिए । सीमाका विवाद अहिले पनि कायमै रहेकाले भारत र चीन तथा भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध अहिले पनि सौहार्द्धपूर्ण छैन । सीमा विवादकै कारण ठूल्ठूला युद्ध भएका र चिसो सम्बन्ध कायम रहेका अन्य कैयौँ मुलुक यो विश्वमा छन् । ती मुलुक अहिले पनि आफ्नो देशको एक चिम्टी माटो पनि नछाड्ने कसम खाएर बसेका छन् । सबै मुलुकका निमित्त आफ्नो सीमासम्बन्धी चासो त्यति पेचिलो र संवेदनशील हुन्छ, जसका लागि त्यो देशका लाखौँ नागरिकले प्राण न्यौछावर गर्न तयार हुन्छन् । विश्वमा सम्भवतः नेपालमात्रै यस्तो मुलुक देखिएको छ, जहाँका मान्छे आफ्नो देशको माटो अरूलाई सुम्पेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्न हिचकिचाउँदैनन् । नेपाली सेना साँच्चै देशभक्त हो भने सीमा मिचिँदा सरकारले केही आदेश दिँदैन भनेर चुप लागेर बस्न मिल्छ ? उसले नै सरकारलाई यस विषयमा झक्झक्याउनु हुँदैन ?
नेपालमा राष्ट्रियताका बारेमा ठूल्ठूला र चर्का कुरा हुने गर्छन् । तर, अहिले प्रष्ट भएको छ कि राष्ट्रियताका ती कुरा साँच्चिकै देशको मायाले गरिएको होइन रहेछ । त्यस्ता कुरा या त आफ्ना काला कर्तुतहरू ढाकछोप गर्न गरिएको रहेछ, या त आफ्ना कुत्सीत उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको रहेछ । व्यवहारमा देखिएका गतिविधिबाट यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
राज्यको सीमाको अनुगमन गर्ने कार्यक्षेत्र भएको छुट्टै मन्त्रालय छ । त्यसअन्तर्गत विभाग र कार्यालयहरू छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासन छन् । दुई देशबीचको संयुक्त अनुगमन समिति छ । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नापी विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा रहेर सीमा सम्बन्धमा त्यति धेरै काम गर्न सकेका थिए । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सीमाको यति बिघ्न बेवास्ता किन भइरहेछ? माटोको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका निकाय र पदाधिकारी सीमाको त्यो हाल हुँदा कसरी चुप लागेर बस्न सकेका छन् ? छिमेकी अगतिलो र दुष्ट छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै आफू हरबखत चनाखो रहनु पर्छ कि पर्दैन ?
वास्तवमा विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको सीमा मिच्ने जुन अभियान चलाइएको छ, यसलाई नेपालको भूमि हडप्ने मौनयुद्धको संज्ञा दिन सकिन्छ, र यस युद्धमा नेपाल कुनै प्रतिवाद नगरी चुपचाप पछि हट्दै छ । मानौँ, नेपालले विगतमा भारतको जमिन बलजफ्ती हडपेको थियो, र अहिले भारतले त्यो जमिन धमाधम फिर्ता लिइरहेकोले नेपालले कुनै प्रतिवाद गरिरहेको छैन । यदि यही क्रम जारी रहने हो भने कालान्तरमा नेपाल भन्ने मुलुक कति बाँकी रहला ? नेपालमा आफ्नो भूमि र त्यसको सीमाको सम्बन्धमा जुन संवेदनाशून्य स्थिति छ, त्यसले पनि भारतको सीमा मिच्ने दुष्प्रवृत्ति प्रोत्साहित भएको छ । सीमामा अलिकति मात्र छिसिक्क हुनासाथ सम्पूर्ण राष्ट्र एक स्वरमा खनिने गरेको भए भारतले यस्तो दुस्साहस गर्न सक्ने थिएन । के उसले पाकिस्तान वा बंगलादेशको सीमामा यसो गर्ने आँट गर्न सकेको छ ? नेपालमा जेसुकै गरे पनि सम्पूर्ण मुलुकले देखेको नदेख्यै, सुनेको नसुन्यै गर्दै आएकाले उसको दुस्साहस यसरी बढ्दै गएको हो ।
नेपाल आफ्नो सीमाको सम्बन्धमा यति संवेदनाशून्य कसरी हुन सकेको छ ? यो सबैभन्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यस सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी छ । हिजो पञ्चायत काल जनतामा आधारित व्यवस्था नभएकोले त्यसले उठाएको राष्ट्रियताको कुरालाई फोस्रो वा मण्डले राष्ट्रवाद भनियो । अहिले जनताको व्यवस्था आएको पनि दुई दशक भयो । खै त सरकार र जनताको राष्ट्रिय भावनामा सुधार ? हामीले केही वर्षदेखि दार्चुलाको कालापानी हाम्रो हो भनिरहेका छौँ । खै त त्यो कालापानी फिर्ता लिन हामीले पहल गरेको ? अहिले प्याराताल हाम्रो हो भन्यौँ । के गर्दै छौँ त त्यो प्यारातालमाथि हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्न ? कि नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै भारतीय साम, दान, दन्ड, भेदको नीतिले काम गरिरहेको छ ?
वास्तवमा भारतले नेपालको भूमि आफूतिर तान्ने र आफ्ना मान्छे नेपालतिर पठाएर कालान्तरमा नेपालमा संकट खडा गर्ने रणनीति अपनाएको प्रतीत हुन्छ । माओवादीहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा पनि भारतलाई घुक्र्याएर सत्तामा जाने माध्यम मात्र भएको अनुभव हुँदै छ । यसै हो भने नागरिक स्वयंले नै केही गर्नुपर्ने हो कि ?
This entry was posted on December 30, 2010 at 11:20 am	and is filed under लेख/ रचना/ निबन्ध/विचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.